Siyaasi Cali Guray, Kenya Haday dagaal damacdo Waxaa Dhici Doonta yaa maali Jirayeey, Gurmadkuna Meel walba Soomaali wuu ka iman,, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasi Cali Guray, Kenya Haday dagaal damacdo Waxaa Dhici Doonta yaa maali...
Siyaasi Cali Guray, Kenya Haday dagaal damacdo Waxaa Dhici Doonta yaa maali Jirayeey, Gurmadkuna Meel walba Soomaali wuu ka iman,,
Khilaafka Kenya iyo Somaliya dagaal ma isu rogi karaa hadiise uu isu rogo sidee ayuu xaalku noqon karaa? Dee ama Jubbaland ayaa Kenya noqon lahayd ama NFD ayaa Somaliya noqon lahayd.
“Soomaalidu waxay yidhaahdeen hunguri wax ka wayn la mariyaa wuu dilaacaa” maanta ayay taagan tahay marka damaca dawladda Kenya la eego. Kenya waxa haysay oo mar hore ogaatay saliidda iyo Gaasta Dabiiciga ah ee ceegaaga Galbeedka Badwaynta Hindiya oo ay dhawr dal oo Afrikaan ahi ku teedsan yihiin. Dalalka sida gaarka ah loo tilmaamay inay ugu badan yihiin khayraadkaasi waxa ka mid ah Mozambique iyo Somaliya oo iyadu xeeb ka dheer 2000Km ku leh Indian Ocean-ka.
Ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Somaliya dhamaantood waxay joogaan kana hawlgalaan Jubbaland oo keliya oo ay gacansaar dhaw la leeyihiin maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan Madaxwane Axmed Madoobe oo si gaar ah ay u taageeraan laakiin hadii xaaladdu ay dagaal Kenya iyo Somaliya ah gaadho Kenya iyo Jubbaland ay gaadhayaan halkii ay ku kala leexan lahaayeen soomaaliduna markaa ay dhinac isugu baydhayaan. Hadii xaaladdu ay ay dagaal noqoto ciidamada Kenya ee ku jira gudaha Somaliya iyo kuwa ay xadka ku soo ururisayba waxay noqonayaan go’doon aan taakulayn iyo gurmad midna ka heli karin dhinaca Kenya waayo dhulka iyo baddan dhinacna wax u soo mari karaa ma jirto. Dhinaca kale ciidamada soomaalidu way ka khibrad badan yihiin kuwa Kenya xaga dagaalka. Dhulka soomaalida oo ah dhul kelya si fudud ayay ciidamada soomaalidu isugu gurman karaan dhinac kastana way ka soo dhaqaaqi karaan marka xaalku gaadho yaa maali jirayeey. Markaa weerarka ciidanada Kenya saw waali duul noqonmaayo khasaare aanay ka soo waaqsan karinna gaadhi maayo milatari ahaan oo dhulka soomaalidu ay degto (NFD) oo dhan la dhaafin maayo? Haa sida anigu aan qabo.
Bariga Afrika waxa la saadaalinayaa in saliida iyo gaasta ku jirta Harada Soomaalida (Somali Basin) uu yahay kan ugu badan horaanriisii oo ah ka degaanka soomaalida Itoobiyana waxa la filayaa in muddo laba sanadood ah uu gaadho in la diro ama lagu sifeeyo Itoobiya iyo Jabuuti. Dhinaca Somaliland sahamintu waxay gaadhay heerkii afraad ee qodista (test drill) gaar ahaan Bariga Burco iyo Oodwayne oo 2019ka lagu wado in la bilaabo. Bariga Berbera ayaa iyadana laga wadaa sahaminta oo marxaladdii sadexaad uu dhamaatay sida la sheegayo.
Dhinaca Somaliya waa sax in dhinaca badda Inian Ocean-ka mudnaanta la siiyo sababo nabadgelyo awgood. Waxa la sheegay in 25 xidhmo oo badwaynta ah dhawaan la kala siiyay shirkado kala duwan si ay sahamin dhamaystiran uga sameeyaan. Xidhmooyinka la bixiyay kuma jiraan sadexda xidhmo ee koonfur uga xiga oo ah inta Kenya damacu ka hayo. Kenya hadii ay sida saxa ah u fakarto khayraadka jaarkeeda wax badan ayay ka faaiidi kartaa gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha hadii aan damceeda waalani jar ka tuurin
Xuquuqda qoraalkani waxa iska leh siyaasi Ali Guray
Previous articleBurundi oo ku hanjabtay inay ciidammadeeda kala bixi doonto Soomaaliya
Next articleDaawo Muuqaal:-Wasiir Maxamed Kaahin Oo Faah Faahiyey Safarka Weftigii Madaxweynuhu Kaga Soo Laabteen Itoobiya